ကာရယ်လ်မန်းက 1960 နှင့် 1970 ခုနှစ်သူမ၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်တုန်းကစဉ်အတွင်း LPGA Tour အပေါ် 40 နီးပါးကြိမ်အနိုင်ရနှင့်တစ်ခုတည်းခရီးစဉ်ရာသီအတွက် 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်အနိုင်ရဖို့အတွက်အနည်းငယ်ဂေါက်သီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မွေး date: ဖေဖော်ဝါရီလ 3, 1941
မွေးရာဌာန: ဘတ်ဖလိုး, နယူးယော့
•အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open: 1965
•အဖွဲ့ဝင်, Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးခန်းမ
• Vare ဒိုင်းဆု (အနိမ့်အမှတ်ပေးပျှမ်းမျှ), 1968
• LPGA Tour ပိုက်ဆံခေါင်းဆောင်, 1969
•အဖွဲ့ဝင်, Fame အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အားကစားဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်းမှခန်းမ
•ကာရယ်လ်မန်းက "ငါ့ကိုရန်အလေးအနက်အားကစားသမားမဆိုအသက်အရွယ်မှာမဆိုသွားစေရေးအတွက်နှင့်လိင်ဖြစ်စေ, အဆို level မှာထူးချွန်ဖို့ကျူးလွန်ခဲ့သောသူတစျဦးဖွစျသညျဒီ COMMITTEE ပထမအကြိမ်လုပ်နေတဲ့အိပ်မက်နဲ့အခွက်တဆယ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပြဌာန်းခွင့်တစ်အသိနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ကြောင်းအိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာကြ၏။ "
•ကာရယ်လ်မန်း: "။ ငါလပေါ်လမ်းလျှောက်တော့ကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့်အဟောင်းနှင့်သေရတဲ့ပျော်မွေ့ဒဏ်ငွေတွေဟာငါကလူကာရယ်လ်မန်းကမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုထင်ဘယ်တော့မှငါဖန်ဆင်းအဆိုပါအမှတ်အသားတစ်ခုရငျးနှီးစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ။ ။ "
မန်းအနေနဲ့ LPGA စံချိန် (နောက်ပိုင်း bettered) setting သည် 1975 Borden ဂန္ထဝင်မှာခုနစ်ခုဆက်တိုက် birdies ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
6-ခြေလျင်-3 မှာကာရိုမန်းသူမ၏ခေတ်အမြင့်ဆုံးအမျိုးသမီးလိုလားသူ (နှင့်အများဆုံးအခြားသူတွေ) ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် LPGA သမ္မတအဖြစ်သူမခရီးစဉ်ရဲ့သမိုင်းကိုကျော်အရပ်ရှည်ရှည်အရိပ်ချပစ် - ကောင်းတစ်ဦးလမ်းအတွက်။
မန်းသူမကိုးနှစ်အရွယ်မှာဂေါက်သီးကစားခြင်းစတင်ခဲ့ပေမယ့်တကယ် 1958 ခုနှစ်တွင်အသက် 13 အထိဂိမ်းသို့အခြေချဘူး, အနောက်တိုင်းအငယ်တန်းနှင့်အချီကာဂိုအငယ်တန်းပြိုင်ပွဲမှာအောင်ပွဲ stardom မှသူမ၏လမ်းအပေါ်သူမ၏စေလွှတ်ခဲ့သည်။
သူမသည် 1961 ခဲ့ပါတယ်, သူ့ပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲ 1964 သည်အထိမလာဘဲအဆိုပါ LPGA အပေါ်သူမရဲ့လူသစ်နှစ်အတွက် 1960 ခုနှစ်လိုလားသူလှည့်ပြီးတော့, ဂရင်းမှာမြောက်ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်သည်။
ဒါကပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိအဲဒီအခြိနျမှာ LPGA ရဲ့ဗိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်သည့်အမျိုးသမီးများအနောက်တိုင်းပွင့်လင်းမှာခဲ့ပါတယ်။ မန်းအနိုင်ရ, 1965 ခုနှစ်တွင်အခြားအဓိကအတူတက်နောက်တော်သို့လိုက် ကိုအမေရိကန်အမျိုးသမီးကိုဖွင့် ။
သူမသည်ကြွလာနှစ်များတွင်တော့ဘူးဗိုလ်ကြီး add နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်သူမရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခြုံငုံ၎င်း၏အထက်သို့လမ်းကြောင်းဆက်ပြောသည်။ 1968 ခုနှစ်တွင်သူမ LPGA Tour အပေါ် 10 ကြိမ်အနိုင်ရ, ထို့နောက်အားဖြင့်အနီးစုစုပေါင်းလွှမ်းမိုးမှုကိုတစ်ကာလအတွင်း 1969 ခုနှစ်အတွက်အခြားရှစ်အောင်ပွဲကဆက်ပြောသည် ကေသီ Whitworth , မန်းကိုအနိုင်ပေးအတွက်တဆင့်ချိုးအကောင်းဆုံး Whitworth ဖို့သာဂေါက်သီးဖြစ်ခဲ့သည်။
သည်အထိ 72,04 ၏မန်းရဲ့ 1968 အမှတ်ပေးပျမ်းမျှအား bettered မခံခဲ့ရ နန်စီလိုပက်ဇ် 10 နှစ်အကြာတွင်ကြောင့်ရိုက်တယ်။
ခရီးစဉ်အပေါ်မန်း၏နောက်ဆုံးကြီးတွေတစ်နှစ်သူမကလေးကြိမ်အနိုင်ရခဲ့သည့်အခါ 1975 ခုနှစ်, ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် LPGA Tour အပေါ်သူမ၏နောက်ဆုံးအနိုင်ပေး ရှိ. , သူမ၏နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုအသှငျအပွငျ 1981 ခုနှစ်တွင်ရောက်လာတယ်။
သူမ၏ဂေါက်သီးကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပြင်, မန်းလည်းခေတ်မီနှင့် LPGA Tour ၏လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဂျိန်း Blalock လိမ်အရှုပ်တော်ပုံနှင့်ခရီးစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးကော်မရှင်နာ၏ငှားရမ်းမှတဆင့်ခရီးစဉ်လမ်းညွှန်, Mid-1976 မှတစ်ဆင့်နှောင်းပိုင်းတွင် 1973 ခုနှစ်ကနေလှည့်လည်သမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူမလည်းမဆုပ်အနစ်အလားအလာစပွန်ဆာပေးဖို့ခရီးစဉ်စျေးကွက်။
မန်းလည်း 1989 ခုနှစ်ကတဆင့် 1985 ခုနှစ်ကနေအမျိုးသမီးအားကစားများဖောင်ဒေးရှင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူမသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးထိပ်တန်းဖြစ်လာဖို့အပေါ် သွား. လည်းစာအုပ်တွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုရေးသားခဲ့ပြီး။ သူမ၏ကုမ္ပဏီကကာရယ်လ်မန်း Inc ကို, ကော်ပိုရိတ်ဂေါက်သီးအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသူဂေါက်သီးကုမ္ပဏီတွေကိုထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သူငယ် Didrikson Zaharias
Stacy Lewis က
ဖီးလ် Mickelson ဆွတ်ခူးနှင့်အဘယ်မှာရှိသူအားလုံးအချိန်ရပ်တည်
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ Michelle Wie
ယော်ဒန်မြစ် Spieth: ဂေါက်ကွင်းရဲ့လူငယ်စံချိန်တင်-ဆိုသည်အကြောင်း
Lee က Trevino အင်ဖို
အဆိုပါ Matrix: ဘာသာတရားနှင့်ဗုဒ္ဓဝါဒ
အမဲသား Timeline ကို: Drake Vs Tyga
Oprah Winfrey ၏တစ်ဦးကကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဘဲလေး၏5အခြေခံပညာခြေရာထူး
ဆိုဒီယမ် silicates သို့မဟုတ်ရေ Glass ကို Make လုပ်နည်း
ခွာနှင့် Sorority Rush - သူတို့ကဘာတွေလဲ?
Peyote နှင့် Native အမေရိကန်ဘုရားကျောင်း
Chord '' ကျနော်တို့အမြင့်ပေါ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီကောင်းကင်တမန် ''
ကောလိပ်ရည်မှန်းချက်များ Set လုပ်နည်း
မက္ကဆီကန်လွတ်လပ်ရေးနေ့ - Guanajuato ၏ Siege
မိခင်ဘာသာစကား (L1 နှင့်)
Homer Simpson ဘီယာအပေါ်ကိုးကား